Ubuchwepheshe banamuhla, njengoba sazi, ningemi, ngokuba akukho isimanga yokuthi manje kukhona ukushintshwa ekhethekile engenantambo kunezimo eziningi. Manje asikho isidingo ukubheka odongeni inkinobho amnyama noma ukhiye - kwanele ukusizakala kule divayisi yokusebenza elula kakhulu esekelwe umsakazo noma amagagasi infrared.
inkinobho Wireless ikuvumela ukuba kahle ukulawula ukukhanya kuyinto Igumbi hhayi kuphela ehlukene, kodwa nayo yonke indlu, ukushintsha ukukhanya yayo. Futhi bonakalise izindonga akudingeki ukuyifaka.
Kuyini wireless ukukhanya switch?
Le ndlela yokwenza encane kuhlelwe nje ngokwanele. Siqukethe amamojuli ezimbili - umamukeli bese Lidlulisela. Njengoba Lidlulisela isignali ukhonza njengelungu inkinobho kanye umamukeli - edluliselwe okuyinto aboshelwe umthombo wokukhanya. Ukuze uxhume udinga nje ukufaka esibulalayo 2 okokufaka izintambo futhi 2 okukhiphayo kuya Iqhwa. Zonke wiring engazazi. Kunalokho, kuye ngokuthi imodeli inkinobho - omsakazo noma amagagasi infrared. Umehluko phakathi kwabo incane: uhla lokulawula ukukhanya kanye kungenzeka ekamelweni olandelayo. Kuzo zonke ezinye izici isimiso wokusebenza uyefana.
Cabangela ezinye izici izingxenye ingxenye inkinobho.
Rc edluliselwe - odlala okuyinto, lapho ethola isignali wesifunda okuhambisanayo uvala i kagesi wiring ukukhanyisa. It isethwe noma eduze luminaire, noma kunoma iyiphi enye indawo ukuthi kuyingxenye endaweni Lidlulisela. Le divayisi encane kakhulu, kungenziwa efakwa amadivayisi ukukhanyisa, ezifana Iqhwa.
Isici esiyinhloko lolu Lidlulisela kuyinto ukutholakala kwegezi generator esikhiqiza lapho ngokucindezela inkinobho ugesi ukhiye. Ingqikithi amandla iguqulwe ibe isignali yomsakazo wacosha nge owamukelayo. Nokho, onobuhle ezinjalo ukushintsha engenantambo abasakwazi eqolo. Kukhona okuhlukile eshibhile yalo ohlinzekela ukusetshenziswa mini-amabhethri. Autonomous umtfombo wemandla kanye esetshenziswa amadivayisi njenge engenantambo inzwa switch ukukhanya, lapho ukulawula wenziwa ngokusebenzisa touch iphaneli.
Naphezu lula ngoba kubonakala sengathi kunokuthula ukushintsha nibonakala ezinjalo - amadivayisi zobuchwepheshe, kuhileleke nezinye izinkinga okuyinto emsebenzini ezincanyana, kodwa wiring eziyinkimbinkimbi kakhulu.
Ukufakwa ukushintsha ilula kakhulu futhi fast, njengoba nje kuvamile namanje flat engasindi futhi zikhululekile. I edluliselwe kungenziwa exhunywe kwi-break isigaba e bentambo kunoma iyiphi indawo ekahle. Uma ucindezela inkinobho inkinobho, lokho kutshela umsakazo ukuthi sithola edluliselwe. Ludala Ukukhipha noma nesifunda esincane isigaba, uya umthombo wokukhanya.
Wireless ukukhanya switch kungenziwa bufakwe usebenzisa itheyiphu kabili emaceleni ukuqinisekisa uxhumano, isibonelo:
ophahleni, udonga, phansi noma kwenye indawo - esisuka phesheya ikamelo zonke izintambo akudingeki, abanikazi fantasy ngakho akugcini;
ku umnyango noma iliphi igumbi, yokugezela, njll (Yikuphi kungaba yisiphi ukuphakama, ukuze kuthi lapho isidingo ukusungula engenantambo odongeni inkinobho kungaba endaweni lapho uzokwazi ukufinyelela ingane, uma kwakuzodingeka ukukhanya);
i headboard, ebusweni amatafula, iKhabhinethi umnyango - kunoma iyiphi indawo lapho sizokwazi ukufinyelela eyeluliweyo ngqo embhedeni; sibonga leli lungiselelo ngeke sizulazule ebumnyameni beyofuna inkinobho, uma kukhona into udinga ukuthola, noma nje ngifuna ukufunda.
Izinzuzo ukushintsha engenantambo
Isizathu esiyinhloko ukukhanya ukushintsha engenantambo zithandwa ngakho yikhono ukufaka nabo ngokuphelele kunoma iyiphi indawo futhi kunoma iyiphi indawo ngokuphelele mahhala ukufakwa futhi umsebenzi wokulungisa. Ukuze ukufakwa akudingeki Stroebe izindonga benze amahanisi wiring, ukusebenzisa ngogesi: kumele basebenzise tape kabili emaceleni. Uhlu izinzuzo, okuyinto benawo inkinobho wireless, iyamangalisa:
ungalungisa ukukhanyisa kude ebhekile;
engaba enkulu isinyathelo sedivayisi ezinjalo;
inkinobho engenantambo iphephile ngokuphelele izingane nezilwane;
okuthembekile futhi iqine;
idivayisi iku ukonga, ukukhanya Isibani dimmers adjustable; sibonga izibani zazo basuke ovuthayo kakhulu ngokushelela, okuyinto usindisa amandla futhi isikhathi eside ekuphileni kwesibani uqobo.
Ngo ukushintsha engenantambo kwanoma iyiphi amaphutha abalulekile aye atholakala. Ukugxekwa kungadala imikhiqizo okuyinto ezikhiqizwa abanye abakhiqizi Chinese. Njengomthetho, izikhalazo ngokuyinhloko okuhlobene nokuntengantenga isignali yomsakazo. Kodwa lezi nezinye izinkinga bengekho ngokuphelele imikhiqizo eyenziwe esemancane eNtshonalanga Yurophu.
Ububi iwukukhetha kuphela izindleko aphezulu ukushintsha engenantambo, okuyinto namuhla itholakala alulona olwawo wonke umuntu. Ukuze isethi eyodwa (Transmitter kanye umamukeli) kuyodingeka ukuthi bakhokhe okungenani $ 30, futhi lokho ngaphandle izindleko ukufakwa. Yingakho ezibekwe ikakhulukazi ezindaweni lapho kungekho ndlela khona ukusebenzisa bendabuko.
inkinobho Wireless libhekene lugcwele izinto eziningi zezinto eziphilayo. Le divayisi ingadlala kuphela oluthathwa ezicini ezintathu eziyinhloko:
zokukhanya ukulawula ikhono;
ngenani amadivayisi ukukhanyisa lapho idivayisi ongasebenza ngayo.
Ishintsha kukhona electronic, ogama ukufakwa kwenziwa ngokucindezela touch izinkinobho izinkinobho lokukhanda. Futhi, iqembu ahlukene bungabonakala inkinobho engenantambo ne remote control, okuyinto kakhulu yelula amakhono leli thuluzi. He is ngaphezu idivayisi uyagijima nge amasignali digital ngesikhathi umsakazo amaza. Ngenxa kubo ke bunikezwa ukungabi khona ukuphazamiseka emsebenzini kokubili inkinobho kanye kamabonakude, esemgwaqweni efulethini. Ayikho izindonga, akukho ifenisha kungaphazamisi ukudlula iyunithi umsakazo. Siyabonga ku-console kungaba kanyekanye ukulawula-8 ukushintsha engenantambo, bese iyanyamalala phakade kudingeka ukuba udabule leli efulethini futhi uvala ukukhanya ukhohliwe. Ububanzi panel incike izici isakhiwo izindlu kanye izimpahla ezisetshenziselwa, lapho izingxenye ezibekwe. Ngokuvamile kuba ku ezahlukene 20-25 amamitha. Amandla livela amabhethri Lidlulisela. Nokho, ngo-umkhuba, leli thuluzi kuyaqabukela ethandwa, ngoba njalo bawuthwale nawe muntu, nalapho console liyadingeka, ngokuvamile ngesandla, wamane akubonakali.
Uma wireless inkinobho akude efakwe izakhiwo zezimboni noma emahhovisi, khona-ke kungenziwa ukususa ibanga elithileko kusuka umthombo wokukhanya. Kulezi zimo, setha repeater.
Amandla ulungise ukukhanyisa
Ngokuvamile, kuba khona ngokuthi kwakungenzeka lokhu ngenxa idivayisi reception, lapho dimmer kuphinde wahlela. Yiqiniso, ukukhanya ukugeleza ukulungiswa inqubo wenziwa phezu inkinobho. Lokhu kwenziwa ngokucindezela isikhathi eside ukhiye noma inkinobho ethile.
Inombolo izibani elawulwa
Lapha, konke kuyafana ne ukushintshwa ezivamile - yakhelwe bangaba nobuhlobo naye babe enkundleni eyodwa noma ngaphezulu amaqembu ukukhanyisa zalapho. Kufanele kuqondwe ukuthi kabili inkinobho engenantambo izobiza izikhathi eziningana eqolo ngaphezu kwanoma olulodwa.
Indlela ukufaka ukushintsha engenantambo ngezandla zabo?
Kulula futhi ukufakwa okusheshayo - ke ingenye inzuzo ebalulekile lolu hlobo idivayisi. Qalisa ukufakela kungenzeka ngaphandle amakhono akhethekile umsebenzi bebodwa, ngaphandle kosizo ochwepheshe kagesi.
Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe msebenzi kanje:
1 Ukufakwa umamukeli-inkinobho. Kunzima, isimiso, akukho lapho. Kuye inani amaqembu ephethwe yokukhanyisa zalapho, owamukelayo ungaba izintambo kuze ezine ephuma idivayisi. Omunye wabo okokufaka, kuyilapho wonke amanye okukhiphayo. Uma kunguwe inkinobho kabili, ngakho-ke izintambo okukhipha ezimbili kuphela. Ukuze ufake lolu hlelo kudivayisi, kubalulekile ukuba baphule esigabeni enezela amandla ukukhanyisa iyunithi bese umane ixhumeke ewuchungechunge idivayisi wesifunda. Uma sikhuluma amaqembu amabili, kulesi simo, konke kuyafana ukuthi we ukushintsha ezivamile - inani zero kuwo wonke izibani, isigaba emagatsheni inkinobho futhi eceleni isetshenziswa ngamunye amaqembu ukukhanyisa.
2. Ukufakwa izinkinobho control, ezivame ukubizwa ngokuthi inkinobho, ngokuvamile kwenziwa silula. Ngosizo umqhele yamba udonga emgodini okuhambisanayo lapho plastic ejwayelekile podrozetknik isethi. Ngaphezu kwalokho namanje, njengoba uma inkinobho elula, ngaphandle ukuthi kuphela oqondene engenantambo kudivayisi izintambo awadingekile - nje kudingeka silungise inkinobho ebhokisini.
Njengoba ubona, konke kulula futhi elula ngokwanele nolwazi olukhethekile emkhakheni Ihluzo Elingafaki Ukuqoka nodaba Ukuthi uxhumana kanjani leli thuluzi, akudingekile ukuba - nolwazi oluyisisekelo ngempela olwanele mayelana nendlela Ukususa kagesi yesifunda.
Efingqa, singasho ngokuphepha ukuthi ukukhanya ukushintsha engenantambo kukhona kudivayisi kunalokho ewusizo, ngaphandle okuyinto kunzima kakhulu ukukwenza, ngisho kwezinye izimo.
Ukusetshenziswa amagagasi omsakazo emhlabeni wanamuhla buya kwande - abantu basebenzisa omakhalekhukhwini, i-Wi-Fi amadivayisi, imisakazo, amathoyizi umsakazo-elawulwa netindlela babe yingxenye yezimpilo zethu.
Shintshela kunethiwekhi engenantambo kukhompuyutha ephathekayo
inethiwekhi Wireless, njengoba umthetho, esetshenziswa abantu abaningi. Abaningi ungaxhumekile kwi-Wi-Fi, hhayi kuphela ekhaya kodwa futhi cafe, ihhovisi, nabangani. Zonke abajwayele, ukuthi uxhumano inqubo othomathikhi, akukho senzo esidingekayo.
On onobuhle eziningi laptops ekufakweni kufanele usebenzise inkinobho ehlukile noma isinciphisi vula i-Wi-Fi. Ngokuvamile, inkinobho wireless eliseKissy phambi notebook. Kungaba sehluke, kodwa umsebenzi owodwa - Ukuvula kanye nokuvala-Wi-Fi. Ukuvula, umane hambisa isilayida kusimo se- "vula".
Irons nge Kuqondile umusi: imfihlo udumo lwawo?
Kritzas Apart Hotel 4 * (Greece / Crete) izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Zonke izivakashi kubalulekile ukwazi ukuthi ngoNovemba kolwandle efudumele
Bazalwane Kovalchuk: Biography
Ukuhlolwa sokukhulelwa phambi ukubambezeleka. Indlela ukukhetha
Conjugate Outdoor: OB ekhethekile